Jeremià 33, Dikateny Iombonana Eto Madagasikara (DIEMDC) | The Bible App
Fampanantenana vaovao ho an’i Jerosalema
1Fa raha mbola voatana teo an-kianjan’ny trano fiambenana i Jeremià, dia nisy indray tenin’ny TOMPO fanindroany taminy nanao hoe:
2«Izao no lazain’ny TOMPO, Ilay manao ny zava-mitranga ka mamolavola azy mba hitantanany azy, dia Ilay antsoina hoe TOMPO: 3Antsoy Aho, dia hamaly anao sady hampianatra anao zava-dehibe izay tsy takatry ny saina sady tsy mbola fantatrao. 4-5Izaho TOMPO Andriamanitr’i Israely dia milaza ny amin’ireo trano eto an-tanàna sy ny lapan’ny mpanjakan’i Joda fa rava avokoa ireo. Ny amin’ny tovon-tany fanafihana sy ny ady kosa dia izao: Tsy ilaina ny hanoherana ny Babilônianina fa hahafeno faty eto an-tanàna izany noho ny olona naripaky ny fahatezerako amam-pahavinirako. Fa ny haratsiana rehetra nataon’ny mponin’i Jerosalema no nahatonga Ahy tsy niraharaha ny tanànany.
6«Kanefa indro Aho hitsabo an’i Jerosalema ka hahasitrana azy tanteraka; ary hasehoko mitafotafo amin’ny mponina indray ny fiadanana sy ny filaminana. 7Haveriko amin’ny laoniny indray i Joda sy i Israely ka hareniko ho tahaka ny fahiny. 8Hodioviko ho afaka amin’ny heloka rehetra izay nataony tamiko izy; eny, havelako ny heloka rehetra izay nikomiany tamiko. 9Ary hahafaly Ahy ny hanonona ny anaran’i Jerosalema, ka ho voninahitro sy haingoko eo imason’ny firenen-kafa rehetra ambonin’ny tany izy. Ary rehefa handre ny soa rehetra izay hataoko amin’i Jerosalema, ireo firenena ireo, dia hangovitry ny tahotra manoloana ny soa rehetra sy ny fiadanam-be izay hataoko aminy.»
10Izao no lazain’ny TOMPO:
«Ianareo vahoakan’i Joda dia mamerimberina hoe rava ny taninay ka tsy ahitana olona na biby fiompy intsony. Marina tokoa fa ny tanànan’i Joda sy ny lalamben’i Jerosalema dia foana ka tsy ahitana olona na biby fiompy monina ao intsony. Kanefa amin’izany toerana izany no mbola handrenesana indray 11ny kotaban’ny fety sy ny horakora-pifaliana. Ho re ao indray ny hiran’ny mpanambady; ho re ao indray ny hira manao hoe:
Derao ny TOMPOn’izao rehetra izao, fa tsara Izy;
eny, maharitra mandrakizay ny fitiavany#33.11 Derao ny Tompo: jereo Sal 106.1 sy nta..
Izany no hiran’ireo mitondra sorom-pisaorana mankao an-tranoko. Eny, hoy Izaho TOMPO, haveriko amin’ny laoniny toy ny fahiny izany tany izany.»
12Izao koa no lazain’ny TOMPOn’izao rehetra izao:
«Eto amin’ity toerana rava ka tsy ahitana olona na biby fiompy ity sy amin’ny tanànany rehetra dia hisy faritra hampandrian’ireo mpiandry ondry ny biby fiompiny. 13Ao amin’ireo tanàna any an-tendrombohitra sy any Sefalà ary any Negeba#33.13 Negeba: jereo 32.44 sy nta., ao amin’ny faritanin’i Benjamîna sy ny manodidina an’i Jerosalema ary ao amin’ireo tanànan’i Joda, hoy Izaho TOMPO, dia handalo eo anatrehan’ny mpiandry azy indray ny ondry aman’osy mba hisainy.»
Tsy hitsoaka amin’izay efa nampanantenainy Andriamanitra
14Hoy ny teny hentitry ny TOMPO hoe:
«Indro avy ny andro izay hanatanterahako ny zava-tsoa nampanantenaiko ny vahoakan’i Israely sy ny vahoakan’i Joda. 15Amin’izany andro sy fotoana izany, dia solofo mpandala ny hitsiny no hapoitrako ho an’i Davida. Izy no hampihatra ny rariny sy ny hitsiny eo amin’ny tany. 16Amin’izay dia ho afaka ny fanjakan’i Joda ary hiaina am-pilaminana ny mponin’i Jerosalema. Ka ny hiantsoana an’i Jerosalema dia hoe ‹Ny TOMPO no fahamarinantsika#33.16 And 14-16: ampit Jer 23.5-6..› »
17Izao koa no lazain’ny TOMPO:
«I Davida mpanjaka#33.17 Tamin’ny andron’i Jeremià dia efa maty tokony ho efajato taona taloha i Davida mpanjaka. Momba ny fampanantenana voatsiahy eto, jereo 2 Sam 7.12-16; 1 Mp 2.4; 1 Tan 17.11-14. dia tsy ho tapaka mpandimby azy eo amin’ny sezafiandrianan’i Israely. 18Ary ny mpisorona taranak’i Levỳ#33.18 Levỳ: zanakalahin’i Jakôba fahatelo izy (Gen 29.34) ary razamben’i Aharôna (Eks 4.14). I Aharôna moa no razamben’ny mpisorona israelita araka ny Nom 18.7. Momba ireo taranaka hafan’i Levỳ sy ny asany, jereo Nom 3.5-10. tsy ho tapaka olona hijoro eo anatrehako hanolotra sorona dorana manontolo, ary hampakatra ny eton’ny fanatitra sy ny sorom-pihavanana fanao isan’andro.
19Ary nisy tenin’ny TOMPO tamin’i Jeremià nanao hoe:
20«Izao no lazain’ny TOMPO: Raha mahafoana ny fifanekena nataoko tamin’ny andro sy ny alina ianareo ka mahasakana ny andro sy ny alina tsy hiseho araka ny fotoanany, 21dia ho foana ny fanekempihavanana nataoko tamin’i Davida mpanompoko ka tsy hanana zanakalahy hipetraka eo amin’ny sezafiandrianany izy, ary tsy hisy koa ny mpisorona taranak’i Levỳ hanao fanompoam-pivavahana ho Ahy. 22Tsia, fa ny taranak’i Davida mpanompoko sy ny an’ireo levita izay manao fanompoam-pivavahana ho Ahy dia ho maro tahaka ny kintana eny amin’ny lanitra ka tsy ho hita isa. ary toy ny fasika eny amoron-dranomasina ka tsy ho hita fatra.»
23Ary farany, dia nisy tenin’ny TOMPO tamin’i Jeremià nanao hoe:
24«Tsy mba voamarikao angaha fa lazain’ny olona hoe nariako hono ireo fianakaviana roa nofidiko, dia i Israely sy i Joda? Izay miteny izany anefa dia tsy mihevitra ny vahoakako ho firenena intsony fa manevateva azy. 25Kanefa izao no lazaiko: Nanao fifanekena tamin’ny andro sy ny alina Aho, ary nametraka lalàna mifehy ny lanitra sy ny tany. 26Koa hariako ve ny taranak’i Jakôba sy ny an’i Davida mpanompoko? Holaviko ve ny hanendry lehibe hitondra ny taranak’i Abrahama sy i Itsehàka ary i Jakôba?
«Tsia, fa hamerina azy amin’ny laoniny Aho ary hamindrafo aminy.»
Explore Jeremià 33 by Verse